ကလိုစေးထူး: စာသင်ကျောင်းကို ရောက်ခဲ့တယ်
ပို့ စ်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ် အစ်ကိုရေ့ မြန်မာလူမျိုးတွေကိုချစ်တဲ့ joe ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကြီးကိုလည်းလေးစားတယ် ။ ဒီဘက်က ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုတစ်ချို့ က ဆက်သွယ်ရေးကင်မဲ့ဇုန်တဲ့ ဘာဆက်သွယ်မှုမှမရှိပဲ တကယ့်သီးခြားကမ္ဘာလိုနေရတာ။ သနားစရာကောင်းတယ် ။ ဒီပို့ စ်လေးနဲ့ အစ်ကိုရဲ့ လုပ်ရပ်လေးတွေအတွက် လေးစားလျှက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Sep 30, 2008, 11:13:00 PM
အစ်ကို့ရဲ့လုပ်ရပ်ကို တစ်ကယ် လေးစားပါတယ်
မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်အနေနဲ့လဲ ဂုဏ်ယူပါတယ် ..
ကျေးဇူးလဲ တင်ပါတယ် အစ်ကို...
Sep 30, 2008, 11:44:00 PM
ဆရာမတယောက်ရဲ့ နောက်ဆုံးမေးခွန်းက အဖြေရ ခက်လိုက်တာ..။
သာဓု သာဓု သာဓုဗျား။
မမိုးချိုသင်းရေ..အဖြေရမခက်ဘူးထင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ရောက်လာအုန်းမှာပါလို့ ကျိန်းသေဖြေရမှာပဲ။
Oct 1, 2008, 12:38:00 AM
နိုင်ငံမှား ပီး လာရာပျောက်နေတဲ့ ကလေးတွေအတွက် အရမ်းခံစားရပါတယ်။ ကျွန်တော်ထင်တယ် မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်း ဒီလိုကိစ္စမျိုးအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြမယ်ထင်တယ်။ မဖြစ်ရင်တော့ တစ်ခုခုမှားနေပီပဲ
Oct 1, 2008, 2:27:00 AM
မင်္ဂလာပါ ကိုစေးထူးရေ ၊၊ စာတွေလာဖတ်သွားပါတယ် ၊၊ မွန်မြတ်ပါတယ်ဗျာ ၊၊အကူအညီပေးတယ်ဆိုတာ ၊၊
Oct 1, 2008, 9:25:00 AM
ကိုစေးထူးရေ တကယ်ကို အကျိုးပြုမယ့်လုပ်ရပ်ပါ..။ ခုလိုစေတနာနဲ့ ကူညီပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးလည်းတင် ၀မ်းလည်းသာပါတယ်ဗျာ...။
Oct 1, 2008, 11:05:00 AM
Hi Ko Klosay Htoo,
this is my 1st comment i have ever written in blogs. I am so interested in blogs by Burmese people even though I didnt make to leave any comments. sorry about writing in Eng as I dont know how to type in Burmese.
You know what .i got tearsalot after reading your article. My thoughts have extended to all those refugees, Daw Su,suffering activists, monks, Bur pple withalot of trouble there,friends, relatives and everything.
still in tears while writing this comment.
it will be really great if someone( whetheraburmese oraforeigner) can explain or talk about our country, struggles, culture to those Karen refugee children onceamonth.
So that at least they can know about their mother country even though they couldnt be brought up there and they will know there are other unlucky children in our country.
Pls next time could you pls tell me how to type Burmese fonts.
Even before i left Burma, i could getachance to read some of your poem,comments and articles in Burmese news website during sept 07 and I love your writings and appreciate you for that.
thank you very much for your noble deeds.
Oct 1, 2008, 8:36:00 PM
မွန်မြတ်သော စိတ်ထားလုပ်ရပ်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အကိုရေ ။ မြန်မာလူမျိုးတွေကို ချစ်ခင်ကိုယ်ချင်းစာသနားစွာဖြင့် အကူညီပေးသူများအားလုံးကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ရှိမိပါတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံအစစ်ကို မသိသေးတဲ့ ကလေးများအတွက်တော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် အချိန်က စကားပြောသင်ကြားပေးသွားမယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ် :)
Oct 1, 2008, 8:52:00 PM
ကျွှန်တော် ရောက်တာ နောက်ကျသွား လို့ ပြောချငိတာတွေ သူများတွေ ပြောသွား ကြ
လို့ ၊ ခင်ဗျားကို ကျေးဇူးလည်း ဂုဏ်လည်းပြုပါတယ်
မြန်မာ ပြည်ထဲ မှာ ရှိ ကြတဲ့ ပြည်သူ တိုင်းပါ နဲတာ နဲ့ များတာဘဲ ကွာခြားမှာ ပါ ဆက်ဆက်ပြီးရေးပါ နော် ဒီလို အကြောင်းလေးတွေ
Oct 1, 2008, 10:26:00 PM
ရင်ထဲမှာ စို့နင့်နင့်ကြီးဗျာ...။ ဆရာမ မေးလိုက်တဲ့နောက်ဆုံး မေးခွန်းကြီးကို " နောက်ထပ် ဘယ်တော့မှ မလာတော့ဘူးဗျ" လို့ အစ်ကို ရင်ကော့ပြီး ဖြေလို့ရတဲ့ အနေအထားမျိုး အမြန်ဆုံးရောက်လာနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့တွေ အတူတူလက်တွဲ ကြိုးစားကြတာပေါ့...။
Oct 2, 2008, 3:43:00 PM
Oct 3, 2008, 2:59:00 AM
အင်း.. ကျွန်တော့်အမြင်တော့ ကိုစေးထူးတစ်ယောက် တကယ်မြတ်တဲ့ ဒါနအပြင် တခြားအရေးကြီးတဲ့ တာဝန်ကြီး တစ်ခုပါလုပ်ခဲ့တာပဲဗျ.. အကို ကိုယ့်ဘာသာ သတိ ထားမိချင်မှ ထားမိပေမဲ့ တကယ့်ရှယ်တာဝန်ကြီးတစ်ခု အကို့ပခုံးပေါ် ကျခဲ့တာ အမှန်ပဲဗျ..
မြန်မာအကြောင်း သေချာမသိကြ.. တချို့ဆိုနာမည်လောက်ပဲ ကြားဖူးကြ.. တချို့ဆို နာမည်တောင်မကြားဖူးကြတဲ့ အဲဒီစေတနာရှင်တွေဟာ အကို့ဖြေကြားချက်တွေပေါ် တင်ပီး ကျွန်တော်တို့ အမိနိုင်ငံတော်ကို ပုံဖော်ကြည့်ကြမှာကိုးဗျ.. အားပါးပါး.. ရှယ်တာဝန်ပဲဗျို့.. အားကျလိုက်တာ..
အဲဒီတော့ ကိုစေးထူးဟာ အဲဒီလို သူတို့ ယုံကြည်မေးမြန်းခြင်းခံရသူပီပီ ဖြေကြားခဲ့ရဲ့လား.. (နိုင်ငံကို မားကတ်တင်း ဆင်းတာမဟုတ်တဲ့အတွက် ရှယ်လေးတွေပဲ ရွှေပေးဖို့ ပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျနော..)၊ ဒါမှမဟုတ် တခြားနိုင်ငံရေး လုပ်စားသူတွေလိုပဲ ဟ.. ခွင်ပဲကွ.. ဖဲ့ဦးမှပဲဆိုပီး သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက် အဖြစ်တွေ.. လွန်တာတွေ.. ဒုက္ခသည်စခန်းဆိုလည်း မောင်းသွင်းခဲ့တဲ့ အဖြစ်တွေ အသာနှာစီးလို့ ကျွန်တော့်နိုင်ငံ စုတ်ပြတ်သတ်လိုက်သဟာဖြင့် အားလုံးက အစိုးရကြောင့်ပါခင်ဗျာ.. ဆိုတဲ့ ဟုတ်တာမဟုတ်တာ အသာထားလို့ ငိုချင်းပဲ ချခဲ့လေသလားဆိုတာ မောင်သတိတော့ဖြင့် စိတ်ဝင်စားမိသားဗျ..
အင်း.. ခုနေမှာ အဲဒီစေတနာရှင် ဆရာဆရာမတွေရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့ အမြင်မှာ သူတို့အိမ်မှာ အသိတွေကို ပြန်ပြောကြမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာ.. စတဲ့ စကားတွေဟာ ဘယ်လိုများလဲ သိချင်စမ်းပါ့ဗျာ..
ဘာပဲပြောပြောဗျို့.. ကျွန်တော်တို့တောင် ကြွေအောင် ဖွဲ့သီနိုင်တဲ့ စာရေးဆရာဟာ အဲဒီလူတွေကိုလည်း အပြောကောင်းကောင်းနဲ့ မြန်မာချစ်စိတ်ကို ရိုက်သွင်းပေးနိုင်မှာ အမှန်ပဲလို့ ယုံတယ်ဗျာ.. (ဟီးဟီး.. သူ့ဘလော့လာရေးတော့ နဲနဲဖားရတာပေါ့.. တော်ကြာကန်ထုတ်နေဦးမယ်..)
Oct 4, 2008, 4:36:00 AM
ကရင်သူပုန်တွေဆိုတာရော ထည့်ပြောခဲ့ရဲ့ လား။ တတိယနိုင်ငံတွေကို ထွက်လာချင်လို့ဒုက္ခသည်ယောင်ဆောင်တာတွေရော ထည့်ပြောခဲ့ရဲ့ လား၊ အစိုးရက လိုက်ချေမှုန်းနေတာ သူပုန်တွေနဲ့ သူပုန် အမျိုးတွေကိုဆိုတာတွေတော့ ထည့်ရှင်းပြခဲ့မယ်လို့ မထင်ပါဘူးလေ။ အကြောင်းအရာတိုင်းမှာ ခိုင်လုံတဲ့ အကြောင်းအချက်တွေရှိနေတာတော့ မေ့မထားသင့်ဘူး
Oct 4, 2008, 5:12:00 AM
မိတ်ဆွေတွေနဲ့ အကိုအမတွေရဲ့ မှတ်ချက်တွေအတွက် ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ခင်ဗျားကိုရော အောက်က အမည်ခံအတွက်ပါ ကျနော် စကားတခွန်း သေသေချာချာ ပြောလိုက်ပါမယ်။ ကျနော် အဲဒီနေ့က အဓိက ကြိုးစားခဲ့တာဟာ အဲဒီစာသင်ကျောင်းတွေမှာ ရောက်ရှိသင်ကြားနေကြတဲ့ ကလေးလေးတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ဆရာဆရာမတွေကြားမှာ ချိတ်ဆက်မှု တခု ကောင်းကောင်းရဖို့ကိုပဲ အဓိက ဦးတည် ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ဒီကလေးတွေရဲ့ စိတ်အခြေအနေကို ဆရာဆရာမတွေ တီးခေါက်မိဖို့ကိုပဲ အဓိကဦးတည်ပါတယ်။ ငိုချင်းချတာတွေ၊ ရယ်ချင်းချတာတွေ လုပ်တဲ့ပွဲလဲ မဟုတ်လို့ သူတို့က သိချင်တာကို မေးတယ်၊ ကျနော်က အခြေအနေတွေကို ပြောပြတယ်။ ဒီလောက်ပါပဲ။ ဒါတောင် မပြောချင်လို့ မပြောဖြစ်ခဲ့တာတွေ၊ ပြောဖြစ်ခဲ့တာတွေထဲကလဲ ဒီစာမျက်နှာပေါ် သိပ်တင်လို့ မကောင်းလို့ ထိန်ချန်ရေးခဲ့တာတွေ အများကြီးပါ။ အမည်မဲ့ပြောတာတွေကတော့ အချက်အလက်ပိုင်းအရ အတော်လေး ရမ်းကားနေလို့ ကျနော် မရှင်းတော့ပါဘူး။ Identity လေးရှိရင် ပိုပြီး ပြောရဆိုရတာ ပိုကောင်းမယ်လို့လဲ ထင်ပါတယ်ဗျာ။